Munaasabad dib loogu howl galinayo wakaladaha howlaha marakiibta iyo gaadiidka badda iyo wakaalada dekadaha soomaaliyeed ayaa waxaa maanta lagu qabtay muqdisho. | shabakada banaadir24 online
banaadir24 news Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeeyb galay wasiirka howlaha guud iyo gadiidka badda Muxiyidiin Maxamed Kaalmooy,wasiiro dowlaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka,wasiir ku xigeenka wasarada ganacsiga iyo warshadaha iyo xubno ka tirsan gudiga baarlamaanka u qabilsan wasarada hwolaha guud iyo gadiidka iyo marti sharaf kale.
Munasabada oo lagu qabtay xaruunta wasarada gaadiidka soomaaliya ayaa waxa ugu horeeytii ka hadlay mareeyaha guud ee wakalada howlaha maraakiibta injineer Qaasim Axmed Cabdulle oo sharaxay waxyabihii wakaladan ay bulshada soomaaliyeed u haysay ka hor burburkii dalka.
Wasiir ku xigeenka wasarada ganacsiga iyo Wasiiru dowlaha wasaaradda arimaha gudahaiyo amniga qaranka oo ka hadlay munaasibaddaasi ayaa sheegay in ay muhiimad weeyn uu dalku u leeyhay howgalinta wakaladaahan oo muddo 20 sano ka badan aan shaqeeynin
Wasiirka wasaaradda Howlaha Guud iyo gaadiidka Badda Muxuyadiin Maxamed Kaalmooy ayaa sheegay in dib u howlgalinta wakaaladahan ay dowladdu dadaal dheer u gashay ayna waxbadan ka qaban donan howlaha hagaajinta marinada soomaaliya.
Wasiirka ayaa hadlakiisa intaa ku daray in howlgalinta wakaaladaha ay gacan ku siiyeen madaxda qaranka uuna ka mahadnaqayo sida ay gacanta uga siiyaan meel marinta howshan.
Wakaaladaha Howlaha Marakiibta iyo gaadiidka badda iyo Wakaaladda Dakadaha Soomaaliyeed ayaa qaban jiray howla badan oo quseeya xisaabinta maraak
« salaadiin,ugaasyo,waxgarad,iyo nabadoono Soo Dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii urur goboleedka IGAD. Ciidamada Booliiska ee degmada Cabudwaaq oo gacanta ku dhigay gacan ku dhiiglayaal »
Categories : WARARKA